Nkà na ụzụ mere ihe niile adaba na n'ime-apụghị iru nke ụmụ mmadụ. Smartphones bụ otu ndị dị otú ahụ kasị ukwuu mepụtara na gbanwere ndụ anyị. Gị smartphone bụ nnọọ kemfe, obere na mfe iji n'ebe ọ bụla na n'ebe nile. Mgbe ọ na-abịa syncing gị iPhone data na-agụnye gị na ndetu, kọntaktị, ozi na ihe ọ bụla ọzọ, syncing bụ mba ndị ọzọ dị ka omenala syncing ebe ị ga na-eji ọtụtụ nke oge, ugbu a, ọ bụ nnọọ mfe iji iCloud, iTunes, na amamiihe atọ ọzọ software dị ka Wondershare MobileTrans. Ka na-lee anya na zuru oke nke na-eji iCloud na Wondershare MobileTrans ka mmekọrịta gị iPhone kọntaktị. Na-ebugote kọntaktsị na iCloud dị mfe ma hassle-free, ka ịghọta nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro nke syncing iCloud kọntaktị na Google aka.
Part 1. syncing iCloud kọntaktị na Google aka
Mbụ niile nleta www.icloud.com iji nweta na ibudata gị iCloud ana-akpo. Iji nbanye gị iCloud akaụntụ, ị mkpa iji gị pụrụ iche Apple ID na paswọọdụ. Ozugbo i wee banye na na gị Apple akaụntụ, pịa "Ndi ana-akpo" wee Nbanye Google Ndi ana-akpo na Mbubata Ndi ana-akpo si iCloud.
Ozugbo i dị gị iCloud kọntaktị, ọ bụ oge mbupụ ha. N'ihi na, pịa "Mwube" icon emi odude na ala ekpe nke isi na ihuenyo. Mgbe ịpị "Ntọala," pịa "Export VCard" dị ka e gosiri na oyiyi. Na-na egwu nke na-aga ebe ị na-azọpụta faịlụ.
Nzọụkwụ 3: Import Ndi ana-akpo ka Google si iCloud
Ugbu a, ị chọrọ ịga gị google kọntaktị page. Iji gaa na pịa ebe a www.google.com/contacts~~V. Na peeji, abanye na na gị Google ID. Ozugbo i tinye akaụntụ gị, pịa "Ọzọ" wee pịa na "Import" nhọrọ na-egosi na ihuenyo. Ị ebudatara VCard faịlụ na ikpeazụ nzọụkwụ. Họrọ VCard faịlụ jidesie gị PC.
Jide n'aka gị Google akaụntụ na-kwere ka mmekọrịta kọntaktsị na Android ngwaọrụ.
Part 2.Sync iCloud kọntaktị na Wondershare MobileTrans
Ike gwụrụ nke na-eji akwụkwọ ntuziaka syncing na-achọ a hassle-free ụzọ mmekọrịta gị na kọntaktị? Wondershare MobileTrans Bụ ezigbo nhọrọ maka gị. Ọ na-arụ ọrụ na amamiihe ọsọ na mmemmem data nyefe si gị iPhone gị Android akaụntụ na mmekọrịta gị na data na Google.
Wondershare MobileTrans-Enye gị ohere ka mmekọrịta ozi, oku na ndekọ, photos, ngwa, music, kalenda na ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ya nke ọzọ elu atụmatụ na-agụnye:
• Ọ na-weere ekwentị gị ndabere.
• Ọ weere data ọ bụla na iCloud ndabere.
• Ọ-enye gị ohere ndabere gị data ma weghachi ya na ngwaọrụ ọzọ mgbe ọ bụla ị chọrọ ka.
• Nọgidere Na-eme na data nchebe na ekwentị gị.
•-akwado ndị ọzọ karịrị 300 igwe na netwọk.
4.988.912 ndị ebudatara ya
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ekwentị gị na-abanye na iCloud akaụntụ
Firstly, ịhọrọ iCloud na akara ngosi na homescreen nke Wondershare mobileTrans. Mgbe ahụ jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Ozugbo gị na ngwaọrụ e achọpụtara site usoro ihe omume, na-anya na gị na PC na ihuenyo. Tinye iCloud akaụntụ na-abanye na ya.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iCloud kọntaktị na Android:
Ugbu a, họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na e dere kọntaktị na ị chọrọ ka mmekọrịta ka Google na ibudata ya ebe a. Wee họrọ "Ndi ana-akpo" nakwa nanị pịa "Malite Copy" button na isi ihuenyo.
Nzọụkwụ 3. syncing Your Android Ngwaọrụ na Google
Ka mmekọrịta gị gam akporo ngwaọrụ na Google, enweta na Ntọala na akara ngosi na ihuenyo na na-abanye ntọala menu, enweta na Akaụntụ taabụ ịbanye Akaụntụ. Ugbu a, enweta na Google akara ngosi. Ọ na-eduga gị Google akaụntụ. Họrọ ihe ị chọrọ ka mmekọrịta gị na Google akaụntụ. Mmekọrịta ihe niile biotek nanị tapping na "mmekọrịta All" button. Ka mmekọrịta kpọmkwem ihe, tinye ọzọ menu ma họrọ. E nwere mmekọrịta ana-akpọ taabụ, ego igbe ọzọ na mmekọrịta ana-akpọ taabụ na enweta na mmekọrịta ugbu a ka mmekọrịta kọntaktị gị.
Syncing kọntaktị gị na iCloud akaụntụ bara uru nke ukwuu n'ihi na ị nwere ike ịnweta kọntaktị gị ngwa ngwa na ihe ọ bụla kọmputa nke desktọọpụ nanị site na-egbu osisi na gị na iCloud akaụntụ. Gara bụ ụbọchị, mgbe ị na a chọrọ na-a akwụkwọ na onwe gị oge niile. Ị adịghị uche ọ bụla na nkeji nkọwa n'ihi na i nwere gị iPhone nri n'akụkụ gị iji mee ka ị oge ọ bụla ị chọrọ. Na isiokwu a, ugbu a, ị maara otú i nwere ike mmekọrịta gị iPhone kọntaktị na iCloud na iji Wondershare MobileTrans maka Mac. Enwe enweghị nkebi ahụmahụ na Wondershare MobileTrans ebe ukwuu nke oge gị na-echekwa na ị na-adịghị ejedebe adịkwa ọ bụla nke gị na data.
> Resource> iCloud> Olee ka mmekọrịta iCloud Ndi ana-akpo Na Google